TRANONKALA ARA-DALÀNA NY ASA
NY TRANONKALA ARA-DALÀNA NY ASA
Ho ara-dalàna ny fikambanana ny fisoratana anarana ny orinasa sy ny sampana, ny varotra, ny fikojakojana ny nanaovana ny asa mitaky ny mahafeno fepetra ara-dalàna ny fanampiana.
Ankehitriny, misy fikambanana na ara-bola ny rafitra mba tsy ho any amin’ny firenena tanteraka amin’ny fiarovana.
Ny asa ny mpahay lalàna sy ny olom-pirenena nitaky fiarovana ny vahoaka sy ny tsy miankina ny zon’olombelona
Ankoatra izany, ny lafiny manan-danja dia ny tsiambaratelo momba ny asa, omena ny olona tsirairay.
Ara-dalàna ny fanampiana ao amin’ny fototry ny asa fanompoana sy ny fikojakojana omena ara-dalàna ireo olona sy ny olom-pirenena ao endrika: am-bava sy an-tsoratra fizaham-pahasalamana momba ny olana ara-pitsarana; ny fandrafetana sy ny fisoratana anarana ny fangatahana, ny fitarainana, ny fanaovan-tsonia sy ireo taratasy ara-dalàna; solontena ao amin’ny fitsarana Ankapobeny sy manokana ny faritra iadidiany, ary T.D.
Lalàna toerana ara-Dalàna ny tolotra dia miompana amin’ny fampiharana sy fanatanterahana ny fampidirana ny fomba ny fiaraha-miasa ara-tsosialy ny matihanina amin’ny fiaraha-monina ny mpisolovava amin’ny ara-dalàna ny fanampiana ny orinasa sy ny olona tsirairay izay mila fanampiana ny mahafeno fepetra ara-dalàna ny asa. Ao amin’ny tranonkala, ny sehatra maimaim-poana fanampiana ara-dalàna ny mpisolovava hanome torohevitra araka ny lalàna ho an’ny orinasa sy ny isam-batan’olona, anisan’izany ny tsy fananana ara-bola mety mandoa ho an’ny tolotra ara-pitsarana.Indrisy anefa fa, be dia be ara-dalàna ny fahalalana ny fiaraha-monina vao nanomboka ny hampivelatra, matetika ny olona tsy manana hevitra fototra ara-dalàna ny foto-kevitra.
Izany fanitarana ny fahalalana ara-dalàna isan’andro maintsy miasa ao anatin’ny fiaraha-mientana. Ny fiaraha-monina dia tsy mbola ampy hahatakatra ny toerana sy ny anjara asany ara-dalàna ny fifandraisana, ary izany dia mitarika ho amin’ny zava-misy fa ny mety ho mpisolovava ny fiaraha-monina dia tsy ampiasaina tanteraka ao anatin’ny boky, araka ny vokatry — ny orinasa, ny tsirairay, mpandraharaha sy ny olom-pirenena noho ny fatiantoka, dia matetika no tsy mahazo ny ara-dalàna noho izay isaina, pamaranana, ohatra, an-trano raharaham-barotra.
Ao anatin ny affiliate fandaharana, ny mpisolovava hanome torohevitra araka ny lalàna momba ny vohikala vaovao fanontaniana izay hiaraka real estate varotra
TOROHEVITRA AO AMIN'NY TRANO NY FIFANDIRANA